माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल र पत्नी सिता दाहालले ५२ औ वैवाहिक वर्षगाठ यसरी मनाए – Classic Khabar
माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल र पत्नी सिता दाहालले ५२ औ वैवाहिक वर्षगाठ यसरी मनाए
May 10, 2021 137
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सिता दाहालबीच वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको ५२ औँ वर्ष भयो । आज उनीहरुको ५२ औं वर्षगाठँको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमा फोटो सार्वजिनक भएको छ । जहाँ सिताको अवस्था गम्भीर देखिन्छ भने प्रचण्ड पनि रुन्चे हासोँ हासेको जस्तो देखिन्छ ।
के भएको हो सितालाई ?
दाहाल पाकिन्सन्स्जस्तो जटिल रोग पीएसपी ९प्रोग्रेसिभ सुपरान्यूक्लियर पाल्सी०बाट पीडित छन् । प्रचण्ड पत्नी सीता स्मरण शक्ति क्षीण हुँदै जाने, रिङ्गटा लाग्ने र हिँड्दा हिँड्दै लड्ने जस्ता समस्या भोगिरहेकी छिन् । यसअघि उनको उपचार अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स आउटपेशन्ट सेन्टरमा गरिएको थियो । सीताको सिंगापुरमा समेत उपचार गरिएको थियो ।
प्राकृतिक चिकित्साविधीबाट उपचारका लागि भन्दै सीतालाई बाबा रामदेवको आश्रममा पनि लगिएको थियो । त्यसअघि प्रचण्ड पत्नीसहित म्याग्दीको तातोपानी कुण्डमा प्राकृतिक उपचारका लागि भन्दै पुगेका थिए । केही महिना अघि मात्र पनि सितालाई उपचारका लागि भारत लगिएको थियो । दुर्लभ स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको प्रोग्रेसिभ सुपर न्युक्लियर पाल्सीबाट पीडित रहेकी छिन् ।
चिकित्सकहरूका अनुसार यो समस्या मस्तिष्कमा असर परेपछि हुने गर्छ । जसबाट मानसिक असन्तुलनका साथै हिड्न, बोल्न र निल्न समेत गाह्रो हुने गर्छ । यो समस्या ६० वर्ष उमेर माथिकालाई हुने चिकित्सकहरुको भनाई छ ।एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालको २०७४ साल मंसिरमा हृदयघातबाट निधन भएपछि उनमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको थियो ।
Prevकस्तो अचम्म ! ९६ वर्षका वृद्ध बुढा र ९६ वर्षकी वृद्धा बुढीले धुमधाम संग गरे बिहे , बने टिकटकबाट नै भाईरल (हेर्नुस् भिडियो)
Nextबेहुली अन्म्याउने बेलामा बेहुला नै डाको छाडेर रोएपछी कसैगरी पनि फकाउन सकिएन, हेर्नुहोस सबैलाई छक्क पार्ने यो भिडियो